ဓမ္မရသ: "အမေး အဖြေ(၂)"
အမေးအဖြေတွေအားလုံးကို ဖတ်သွားပါတယ်။ ကျေနပ်လောက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြေတွေကြီးပါဘဲခင်ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက လူသတ်သမားကို တရားဟောတဲ့ နေရာမှာ “ဘုရင်က ခိုင်းလို့ သတ်ရတာပါလို့ ပြောတော့ ဒါဆို လူသတ်သမားမှာ အပြစ် မရှိဘူးလို့ ပြောပြီး တရားဟောလိုက်တာ သောတပန် ဖြစ်သွားတယ်။” လို့ ရေးထားတာလေးကို နည်းနည်းလောက်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်နေရာမှာ ဖတ်ဖူးတာကတော့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက တိုက်ရိုက်အပြစ်မရှိဘူးလို့ မပြောဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဘယ်သူကသတ်ခိုင်းတာလဲလို့ မေးတဲ့အချိန်မှာ ဘုရင်ကသတ်ခိုင်းလို့ သတ်တာပါလို့ ပြန်ဖြေရင်း လူသတ်သမားက ဒါဆိုရင် ငါ့မှာ အပြစ်မရှိဘူးလို့သူ့ ဖာသာစဉ်းစားမိတာလို့ ဆိုထားပါတယ်။ အရှင်မြတ်ကြီးက တရားထဲစိတ်မရောက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ လူသတ်သမားကို ပရိယာယ်သုံးပြီး တရားဟောတယ်လို့ မှတ်သားမိဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဘာသာရေးဘက်မှာ လေ့လာနေဆဲသူများ တစ်မျိုးတမည် မှားယွင်းအဓိပါယ်ကောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိလို့ ပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်အခုလိုပြောတာကို စိတ်မရှိပါနှင့်လို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ် ကိုအောင်ဦးခင်ဗျား။
ဟုတ်ကဲ့ အခုလို အများကြီးရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘာသာခြားတစ်ယောက်ကို ပြောပြတဲ့အခါမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ မှန်ကန်စွာနဲ့ ကျင့်ကြံအားထုတ်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ လက်တွေ့ရရှိတယ်ဆိုတာတွေကိုပါ ပြောပြခြင်တာပါ...အထူးဆန်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြောပြခြင်တာကလည်း ပိုပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်နဲ့ အယူအဆမှန်ကန်တဲ့ ဘာသာတစ်ခုလို့ သိစေခြင်တာပါ သူတို့ကို...ဒီလိုအထူးဆန်းတွေနဲ့ ဘာသာရေးကို စည်းရုံးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး...အခြားဘာသာတွေနဲ့ မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ ပြောပြတဲ့အခါမှာ လက်တွေ့သဘာဝကျတဲ့ အရာလေးတွေနဲ့ ပြောခြင်တာပါ...တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘုရားရှင်ကို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာ လမ်းညွန်ရှင်အဖြစ် ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကိုးကွယ်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတွေကိုပါပြောပြခြင်တယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုအောင်ဦးပြောသလိုပါပဲ ပထမဦးဆုံးမှာ ကံ ကံ၏ အကျိုး နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အခြေခံလေးတွေကနေပြီးတော့ ဆက်လက်ပြောကြည့်ပါမယ်...နောက်မှ တစ်ဆင့်ခြင်း အချိန်ရသလို ပြောပြကြည့်ပါမယ်....နောက်မှ သိခြင်တာလေးတွေကို မေးပါ့မယ်...အခုလို အချိန်များစွာကြီးပေးပြီးတော့ ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုအောင်ဦး....
ကိုအောင်ဦးရေ အမေးအဖြေလေးတွေဖတ်သွားတယ် ကျွန်မတော့ အရမ်းမသိတော့ ၀င်မဆွေးနွေးတတ်ဘူး. ဖတ်ပြီးမှတ်သွားပါတယ်နော်.
ဆွေးနွေးခန်းလေးက အင်မတန် တန်ဖိုး ရှိတယ်ဗျာ.။..
ဟုတ်ပါတယ်.. ဦးအောင်ဦးပြောသလိုပါပဲ.. မက်မက်တို့
မြတ်စွာဘုရားက သစ္စာလေးပါး မြတ်တရားကို သာ တိုက်ကျွေးသွားပါတယ်...
အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေပါ။။ မသိသေးတာတွေ သိခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါ...